Soo-buuxinta dareeraha iyo qufulka mashiinka mashiinka - shirkado soosaarayaal, alaab-qeybiyeyaal
Buuxinta dareeraha iyo mashiinka qufulka HGS-240 (P15)
Waxqabadka iyo muujinta Awoodda Sare, xawaaraha sare, saxsanaanta sare, iyo xakamaynta dhaqdhaqaaqa sare. Xakamaynta xakamaynta xawaaraha soo noqnoqoshada Stepless. Kontaroolada mootada. Iskudhafka mashiinka aadanaha. Jiidida filimka Servo. Beddelka caaryada iyo dhererkeeda hagaajinta ayaa ku habboon oo sahlan in la shaqeeyo. Furida otomaatiga ah, goynta duubista filimka iyo duubista. Waxay leedahay shaqo isku toosin qaab togan iyo mid taban oo leh aaladda sawir qaadaha. Maaddaama dhalada hoose ay fidsan tahay, way istaagi kartaa ...
Buuxinta dareeraha iyo mashiinka qufulka HYLGX-2
Khadadka wax lagu duubo ee E-dareeraha ah Khadkan xirxira wuxuu ka kooban yahay miiska quudinta dhalada, mashiinka wax buuxiya, mashiinka wax lagu xiro, mashiinka calaamadeynta. Waxaa si gaar ah loogu talagalay xirxirida dareeraha elektarooniga ah. Khadadka oo dhan waxaa loogu talagalay iyadoo loo eegayo heerka GMP, dhammaan qeybaha la xiriira qalabka waxaa laga sameeyay bir bir ah oo tayo sare leh. Waxayna quseysaa noocyada kala duwan ee dhalooyinka. Waa qalab ku habboon cuntada laga soo saaro warshadaha qurxinta dawooyinka kiimikada. Nooca 1.Linear, mashiin kasta wuxuu u socon karaa si madaxbanaan, waxaa lagu hagaajin karaa vario ...
Waxqabadka iyo muuqaalka Waxay qaadataa xakamaynta PLC iyo xakamaynta xawaaraha soo noqnoqda ee stepless. Hawlaha shaqada sida kala furfurida, sameynta balaastigga, buuxinta, daabacaadda nambarrada tiro badan, indentation, feedh iyo goyn ayaa si otomaatig ah barnaamijka loogu dhammeeyaa. Waxay qaadataa qalabka is-dhexgalka mashiinka aadanaha, kaas oo leh hawlgal fudud. Buuxintu ma laha dhibco, xumbayn, iyo daadad. Qaybaha la soo xiriiraya daawada dhammaantood waxay qaataan wax tayo sare leh oo ahama, oo la kulmaya GMP ...